Jibis ay ku dhegan yihiin in ka badan 500 oo shilin oo lagu badbaadiyay Australia | WAJAALE NEWS
January 11, 2019 - Written by Reporter:
‘Waa sida adiga oo kor u qaadaya waxyaabaha ay carruurta ku dheelaan’
“Dhab ahaantii, masku xaalad culus ayuu ku sugnaa,” ayuu yidhi.
“Wajigiisa oo dhan waa uu bararay wuuna gadgaduutay waxaana ka saaid caleeyay shilinta ku dheganeyd.”
Waxa uu sheegay inuu dareemay markii uu maska shilinta ka qabqabanayay “sida anigoo kor u qaaday waxyaabaha ay carruurta ku dheelaan, waxaas oo gacmaheyga ku dul dhaqdhaqaaya”.
Sikastaba xaalku ha ahaadee shilintaas tirada badan ee maska ku dheganeyd ayaa waxa ay astaan u aheyd in masku uu xanuunsanayay, ayuu yidhi, oo weliba ay dhibaato ka soo gaadhay xaalado ka dhashay abaar iyo kuleyl hayay.
“Waa ay iska caddeyn in masku uu aad u xanuunsanayay oo laga soo tallaabay hab difaaceedkiisii,” ayuu yidhi bare sare Fry.
Mr Harrison ayaa goor dambe waxa uu sheegay in maska Nike la yidhaahdo uu caabuq qaaday, walow haatan ay xaaladdiisu wanaagsan tahay”.